सडक संकेतबाट जापानी भाषा सिक्ने तरिका | Nepali In Japan
जापानमा तपाइले यहाँ जता ततै अनेक संकेतहरु देख्न सक्नु हुनेछ । लगभग सबै संकेतहरु जापानीमा लेखिएका हुन्छन् । विदेशीका रुपमा यी संकेतहरु बुझ्न कहिलेकाँही गाह्रो पनि हुन्छ । पछिल्लो समयमा जापान भ्रमणमा आउने विदेशीको संख्या बढिरहेको छ । विदेशी मैत्री बनाउन जापान सरकारले यी संकेतहरुको अनुवाद पनि गरिरहेको छ । यी संकेतहरुबाट रमाइलोसँग जापानी भाषा सिक्न पनि सकिन्छ । आजको यस लेखमा यस्तै केही संकेतहरुबारे बताउन गइरहेका छौं ।
१. फोहोर नगर्न भन्ने डाइनोसोर
एकदम सृजनात्मक लागेको एउटा संकेत हो सन्देश भन्न डाइनासोरको प्रयोग । संकेतमा ‘ごみ捨て禁止’ लेखिएको थियो । अंग्रेजीमा यसको अर्थ फोहोर नगर भन्ने हुन्छ ।
२. तपाइमाथि निगरानी भइरहेको छ
यो घाँसमा लुकाइएको अर्को संकेत हो र त्यो पनि लगभग मेटिसकेको थियो । सो संकेतमा ‘どこかであなたを見ています’लेखिएको थियो । यसको अर्थ ‘तपाइमाथि कतैबाट निगरानी भइरहेको छ भन्ने हुन्छ’ । यो अलि डरलाग्दो सुनिन्छ । तर अरु कसैको सम्पत्तिमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न यस्तो संकेतको प्रयोग गरिन्छ ।
३. प्रवेश निषेध
तपाइले यो संकेत कम्तिमा दिनमा एक पटक अवश्य देख्न सक्नु हुनेछ । रातो रंगले नै प्रवेश निषेध वा जापानीमा ‘立入禁止’ भन्ने हुन्छ । यो संकेत शपिङ सेन्टर वा निर्माणाधिन क्षेत्रमा धेरैजसो भेटिन्छ ।
४. ठूलो हातले बच्चालाई धकलेको
कतै कतै भने ठूलो हातले सानो बच्चालाई जमिनको प्वालमा धकेलेको देख्न सकिन्छ । यसमा ‘この中に入ってはいけません’ लेखिएको हुन्छ । यसको अर्थ ‘प्रवेश निषेध’ नै हो । अक्षरमाथि भने मेटिसकेको ’अन्य अक्षर पनि थिए । यसमा खतरनाक अर्थात् जापानीमा ‘あぶない’ लेखिएको थियो । यो खान्जीमा नभएर हिरागानामा थियो । बच्चाले पनि बुझ्न सकुन् भनेर कहिलेकाँही संकेत कान्जीमा हुँदैन ।
५. कन्भेनियन्स स्टोरको सुविधा
जापानमा करीब सबै कन्भेनियन्स स्टोरमा निःशुल्क शौचालय प्रयोग गर्ने सुविधा छ । जापानमा ५० हजार भन्दा बढि कन्भेनियन्स स्टोर छन् । तपाइले जहाँ पनि शौचालय देख्न सक्नु हुनेछ । यिनीहरुमा ‘ご自由にお使いください’ अर्थात् निःशुल्क प्रयोग गर्नुहोस् लेखिएको हुन्छ । शौचालय प्रायः कन्भेनियन्स स्टोरको पछाडिपट्टि भेट्न सकिन्छ । यसमा तल चित्रमा देखाइएको जस्तो संकेत हुन्छ ।
जापानमा दैनिक जीवनयापनमा क्रममा देख्न सकिने यी केही संकेतहरु हुन् । यी तपाइको लागि निकै उपयोगी छन् । सडकमा देखिएका यस्ता संकेतहरु हेर्नुभयो र त्यसमा के लेखिएको रहेछ भनेर उत्सुक हुनुभयो भने केही न केही पक्कै सिक्नुहुनेछ । यस्तै खालका थप संकेतहरु हामी आगामी लेखमा पनि राख्नेछौं ।
Prevविश्वको ध्यान खिच्दै जापानी भेन्डिङ मेशिन
Nextतपाईले थाहा पाउनैपर्ने जापानका ४ सडक नियमहरु